I-Sun King 's Imper, "Umlingo" - I-Airbnb
I-Sun King 's Imper, "Umlingo"
Igumbi lakho lokulala e iflethi sinombuki zindwendwe onguAnna Rita
UAnna Rita ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-100% yeendwendwe zakutshanje.
Indawo yam inefenitshala endiyicingayo yokuyilungisa, ndidibene nefenitshala yakudala neyezinto zakudala ivela kumakhaya ezalamane ezisondeleyo. Zisemgangathweni, zijikelezwe yigadi entle apho umhlaba usenza sonwabe khona. Indlu yam ijonge ilanga imini yonke kwaye iyonwabela indalo ejikelezileyo. Indlu yam iza kufikeleleka kuphela kumabhinqa, kubantwana nakwizinja ezincinci kuba ifuna ukuba yindawo yokuphumla yokwenyani nokuvuselela amandla amahle amabhinqa.
Ifumaneka kuphela kubahambi abangamabhinqa.
Amagumbi oza kuhlala kuwo, aneebhedi ezitofotofo kakhulu, aza kuba negumbi lokuhlambela elisetyenziswa nangabanye abantu (ziindwendwe kuphela) kwaye anefeni.
Baya kwamkela nenja enobukhulu obuphakathi ebizwa ngokuba yiTequila kunye nekati ehlala ngokukodwa egadini.
Le meko iyavuyisa, iyahambelana ibe icingisisiwe, yenzelwe ukuyeka ukudinwa kwemihla ngemihla.
Ubuhle bendawo endihlala kuyo kukuba kulungele abahambi bezoshishino neeholide abafuna ukuhlala kwindawo ethe cwaka baze bonwabele indalo. Inepuli yokuqubha yasehlotyeni evulekele uluntu nemizuzu eyi-10 xa uhamba ngemoto usiya kwindawo ekungenwa kuyo kwiindlela neendlela zokunyuka intaba.
Ekugqibeleni indlu yam ithatha imizuzu eyi-10 ukuya kwiTurin Outlet Village ngoko lithuba elihle lokuthenga
Umbuki zindwendwe ngu- Anna Rita
Ndihlala kule ndlu kwindawo yokuncokola ngoko siza kuba negumbi lokuhlala kunye nekhitshi.
Ukuze le ndawo iphole ngakumbi, ndiye ndenza intsebenziswano neziko lobuhle, i-hairdresser kunye nogqirha wamakhambi, ngoko ndiza kufumaneka ukuze ndikhathalele ukubhukisha ezinye izinto, ngexabiso lesaphulelo, ukuba kuyimfuneko, ndinokubhukisha ndize ndiqaphele ukurhoxiswa ubuncinane kweeyure eziyi-24 ngokuphathelele idinga.
Ukuze le ndawo iphole ngakumbi, ndiye ndenza intsebenziswano neziko lobuhle, i-haird…
Inombolo yomthetho: 00108200002
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Chivasso